Active Member Info. About. What's This?
ⓘ Active Member
1.1. Lalana 1992-1994: Ny start-up, Freestyle Productions, hetsi-Panoherana
Mpikambana mavitrika, natsangana taminny 20 jona ny 1992 avy hatrany rehefa avy ny fampisehoana ny Vahoaka Fahavalo ao aminny Κατράκειο avy aminny B. D. Foxmoor miaraka aminny DJ MCD Dimitris Kritikos. Ny taona manaraka ny B. D. Foxmoor namorona ny Freestyle Productions, ny famokarana aminny alalanny orinasa izay efa tsy miankina dia namoaka ny voalohany indrindra grika hip-hop album, ny zava-bitany rakikira ny Mpikambana Mavitrika ao aminny hetsi-Panoherana ao 500 dika mitovy. Izany dia voarakitra aminny B. D. Foxmoor tsy manana na inona na inona manokana ara-teknika dia midika ary na inona na inona fianarana mozika ny fahalalana. Taminny 1993 niditra tao aminny tarika ny Xray Nikitas Clint ary ny Tena D Dimitris Konstantopoulos aminny B. D. Foxmoor mba hivory sy hanangana vondronolona, ny mitovy hevitra, ny fanohanana ny ezaka rehetra, satria taminizany fotoana izany ny tontolonny hip-hop aminny teny grika tononkira dia zavatra fahita eo aminny mozika Gresy. B. D. Foxmoor fisaorana ny voalohany manokana album, aho Mbola Mpikambana Mavitrika 500 dika mitovy manaraka ny taona 1994 rakikira faharoa ny tarika, Ao ny ora aloka 500 dika mitovy.
1.2. Lalana 1995-2002: Fifanarahana Warner, ary Ny lehibe bay, Low Bap
1995 Mpikambana Mavitrika ao aminny nahasarika ny liana ny firaketana an-tsoratra ny orinasa ary lasa ny voalohany grika hip-hop tarika, izay famantarana ny fifanekena aminny iraisam-pirenena an-tsoratra ny orinasa. Aminny raharaha manokana aminny Warner. Tao anatinny volana vitsivitsy κυκλοφορήθηκε ny kapila mangirana fahatelo ny Mpikambana Mavitrika, izay nanao azy ireo fantatra. Ny lehibe, ny helo-drano ao ny fantatra tsara ny lalany, Henoy ny reny sy ny mpitsoa-Ponenana. Avy eo dia ny B. D. Foxmoor ary Mpikambana Mavitrika ao, nanapa-kevitra ny anaranao ny tontolonny hip-hop, misolo tena ny zavatra hafa, mba hanavahana azy avy aminny hip hop izany dia mandeha manodidina ny momba Ny.E.Oh. Izy ireo atao hoe tena Ambany Bap, mametraka midika izany fa ny fifandraisana mivantana fa ny teny dia aminny fiainana. Ny taona izy misintona ny tarika DJ MCD.
1996 κυκλοφορήθηκε ny rakikira faharoa ny Mpikambana Mavitrika ao aminny Warner, Avy aminny toerana manjavona. Izy nifidy ny hira Ho anny rahalahy sy rahavavy izay very tany am-boalohany, izay manaraka ny taona lasa ny voalohany, CD iray. Hita sy ny remix Vardarismix, mahakasika ny Babis Papadopoulos sy Panos Tolios, dia ireo mpikambana ao aminny θεσσαλονικιώτικων vatolampy fatorana, Lavaka sy ny Hazo Sabatra, tsirairay avy. Ao anatinny 1997 fametraham-pialana avy ny tarika ny Tena F ary ny volana novambra taminio taona io ihany no nanorina ny Sakana.
Taminny volana aprily taona 2002, ny fampielezam-peo "nofy boky" dia nahavita ny En Lefko FM, aminny farany ny fampisehoana "Pejy 74," izay, na dia nanana ny isa ambony dia ambony, no tena raikitra tapaka rehefa afaka 6 volana noho ny firehan-kevitra ny fahasamihafana aminny gara. Taminny fahavaratry ny taona 2002 ny Xray manambara ny fanapahan-kevitra ny handao ny tarika noho ny antony manokana
, dia toy izany no namela ny tarika iray ihany no mpikambana ao, B. D. Foxmoor. Handray anjara aminny fiara Andalan-tsoratra ny ακρόνειρο, izay κυκλοφορήθηκε taminny 12 desambra, sy ny CD iray fambara ho anny ny rakikirany, "02/12/02", izay κυκλοφορήθηκε ny 1 oktobra. Ny Andalan-teny ho aminny ακρόνειρο izany dia voarakitra fa aminny toerana iray any Gresy, ao aminny studio Mandalo aminny B. D. Foxmoor, ary nandritra ny sisa ny studio Kambana Tampon pays de Galles. Ankoatra ny an i Adama Fuest sy grika mpanakanto ny ambany-bap ao anatinny kapila misy fiaraha-miasa iraisam-pirenena mpanakanto, toy ny italiana tarika Assalti Frontali, ny angilisy Winston Irie, ny ekipa ny DJ ny avy any pays de Galles, Optimas Praiminisitra, sy cellist Hugh McDowell, mpikambana taloha tao aminny malagasy tarika Herinaratra Hazavana Orchestra.
1.3. Lalana Ny taona 2003 ka hatraminizao
Taminny 2003, ny B. D. Foxmoor defragments ny Mpikambana Mavitrika, miaraka aminny DJ Booker sy Sadahzinia, izay nandray anjara tao aminny tahirin-tsary sy fampisehoana ny tarika hatraminny taona 1994. Aminny iray aminireo tahirin-tsary tavela tao aminny fifanarahana ny Mpikambana Mavitrika ao aminny Warner, o B. D. Foxmoor naorina taminny aprily 2003, miaraka aminny Sadahzinia ny tsy miankina label 8ctagon. Taminity taona ity dia ny B. D. Foxmoor sy Sadahzinia mivezivezy ny alalan ny 8ctagon ny faha-4 solo rakikira ny tsirairay, tsy matahotra, ary Ny Hustle sy feno olona misomebiseby ny antics tsirairay avy, koa ny B. D. Foxmoor namoaka ny 12" vinyl Tsy misy olona ny Tany, miaraka aminny fiarahamiasanny britanika mpiangaly rap Rodney P. Avy aminny 17 novambra, manomboka ny fampielezam-peo "nofy boky" avy aminny matetika ny SKAI 100.3 FM, ihany koa ny maha-azo idirana aminny alalanny aterineto manerana izao tontolo izao.
Taminny taona 2004, Mpikambana Mavitrika ao dia momba ny fanafahana ny voalohany firaketana an-tsoratra ny vaovao ny soratra sy ny andro farany aminny alalanny Warner, mitondra ny lohateny hoe Fiera. Izany kapila mirakitra ny hira ny fiaraha-miasa aminny B. D. Foxmoor aminny Rodney P Tany Tsy misy olona toy ny bonus manara-maso ny 8ctagon.
Taminny taona 2005, ny B. D. Foxmoor fisaorana ny faha-5 solo album, Rava ao Hiphopoly sy ny 11 oktobra 2005 nivoaka ny faha-10 studio rakikira ny Mpikambana Mavitrika sy 1 aminny alalanny 8ctagon, mitondra ny lohateny hoe Blah-fitenenan-dratsy ary dia CD sy DVD ny DVD misy 3 raki-tsary sy fampisehoana ny Mpikambana Mavitrika, izay zava-nitranga taminny 28 May 2005 aminny Rodon ary ny iray farany alohanny izany mikatona.
Taminny 2006 izy no namoaka ny faha-5 manokana album Sadahzinia Πετρανάσα. Taminny volana jiona taminio taona io ihany indray navoaka taminny vinyl ao voafetra ny isanny dika mitovy ny hetsi-Panoherana, ny reraka, mpahay tantara intsony, rakikira voalohany ny Mpikambana Mavitrika. Taminny 18 novambra, namoaka ny rakikira vaovao ny Mpikambana Mavitrika ao aminny Blah-fitenenan-dratsy ny finoana 2 toy ny vinyl avo roa heny ary mpialoha lalana ny tafiditra vaovao barotra, Σκιεράτσα, ny hetra ny boxset, izay navoaka taminny 4 desambra, ary ao aminny CD 3 vaovao ny rakikira: Blah-fitenenan-dratsy ny finoana 2, Lota sy ny Apnea. Herinandro taty aoriana, aminny faha-11 desambra dia nisaorana taminny naha-misaraka CD. Ao aminny hetsika ity ny tarika dia tsy ahitana afa-tsy aminny B. D. Foxmoor sy Sadahzinia.
Taminny taona 2009 dia namoaka ny rakikira faha-13 ny Mpikambana Mavitrika Noho ny manamboatra ny λάθια ao aminny fanontana double LP sy double CD, nanaraka ny "hetra ny fanontana" mitovy album, ary ny velona peo fanomezam-Boninahitra ny Velona Mpikambana Mavitrika.
Taminny taona 2011 dia namoaka ny rakikira faha-14 ny mpikambana Mavitrika ao aminny anaram-boninahitra Ny hazo vouves ny sisiny.
Taminny volana desambra 2012 dia namoaka ny rakikira faha-15 ny mpikambana Mavitrika ao aminny, mitondra ny lohateny hoe fitaovam-Piadiana.
Taminny fahavaratry ny taona 2014 dia namoaka ny rakikira faha-16, ny tontolo izao voarindra Alivas vinyl sy Cd, izay manamarika ny faha-2 vanim-potoana ny tarika. Ao aminny firaketana an-tsoratra izany dia misy fandraisana anjara ny Nikita Clint, ny faniratsirana ny fivavahana sy Manindrona. Koa taminny volana aprily ny mitovy taona B. D. Foxmoor mandrindra ny "Umicah" ary mitondra aminny sehatra sasany namana taloha sy ny famatoran ny Freestyle Productions dia mba omeo ny vahoaka ny hanandrana ny vanim-potoana voalohany ny Ambany Bap.
Aminny 2015 ny tarika dia nanambara fa ny fampiatoana, rehefa nampanantena ny famoahana ny farany rakikira mitondra ny lohateny hoe "Κάρπιμο".
2. Asa hafa
Ny fametrahana ny fanao isan-taona Ambany Bap Fetibe nanomboka ny taona 1997 izay efa fototry ny Tandrefana Attica sy mivelatra hatrany ny faritany manokana hiaina ny asa. Ny fetibe, ankoatra ny velona manampy eo aminny fifandraisana aminny vahoaka ny Mpikambana Mavitrika ary ny hafa lowbap vondrona sy mampahafantatra ny momba ilay tantara ny tontolonny hip-hop, miaraka aminny fomba fijery ny digested ny mari-pamantarana sy ny tranainy. Isika no efa natao 9 ofisialy lowbap Fety, ary koa ny maro hafa kely isan-karazany ao aminny faritany.
Taminny volana desambra 2002 nisokatra taminny Perama, ny fivarotam-boky ny anarana hoe "tsy ho ela"
Freestyle Productions ary, aminny alalanny fanitarana, ny B. D. Foxmoor ary Mpikambana Mavitrika ao, no nandray anjara taminny famoahana 75 record albums sy ny tetikasa hatraminny taona 1993. Tsy maintsy tanterahana velona mihoatra ny in-400 tao Gresy, ary koa any Angleterre, sy pays de Galles tany Alemaina.
Taminny 5 febroary 2001, nisokatra taminny Perama, ny voalohany dia ny hip hop firaketana an-tsoratra ny fivarotana ao Gresy, ny "Intro".
Mpikambana mavitrika, efa nanana tsotsotra "miaina" aminny taona 1993 ny taona 1995 aminny Fanzine, "Radicalistic", ary noho izany, ankoatry ny zavatra hafa, nanomboka ny fikoriananny ny pirinty "nofy boky". Ao aminny pejy "Ονειρολογίου" mahita lowbap sy ny eritreritry ny mpanao gazety sy ny olon-kafa. Ny gazety dia zaraina maimaim-poana aminny alalanny namely an-tsoratra store talantalana sy ny fivarotam-boky, ary avy aminny seza ny Freestyle ao Perama. Efa niresaka zavatra be dia be ho anny dikan-teny vaovao.
Mpikambana mavitrika, efa vonona ny feonkira ny endri-javatra horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe "Bar", ary koa ny hira ho anny horonantsary fohy mitondra ny lohateny hoe "simenitra tsy misy nenina". Koa, efa tapitra ny feonkira ny nahazo loka Fetibe Thessaloniki sarimihetsika "Morphine, mbola mitady aho".
Ny anjara-raharaha ao aminny afo dia ny boky izay navoaka taminny 2000 avy aminny teny grika Taratasy ny gazety. Ahitana ny tononkira rehetra aminny B. D. Foxmoor toy ny ao aminny 2000 ary koa ny tsy navoaka sary. Efa ny boky efatra ny dikan-teny. Ny anjara-raharahany sy ireo ao aminny afo navotsotra taminny taona 2006 aminny dikan-px izahay ary ahitana ny tononkira rehetra aminny B. D. Foxmoor, ao aminny vanim-potoana 2000-2006.
02/12/02 WEA, 2002 – CD iray
Ho anny rahalahy sy rahavavy izay very tany am-boalohany WEA, 1997 – CD iray
Ny mpitsoa-ponenana WEA, 1996 – 12" ny iray promo
Henoy ny reniny WEA, 1995 – 12" ny iray promo
Velona ny fandraisam-peo, ny famoriam-bola
Fanomezam-boninahitra ny Velona Mpikambana Mavitrika ao aminny Throttle 26 jona 2009 8ctagon, 2009 – DVD
Ny "Lehibe Gulf" ny "Fiera" WEA, 2005 – CD
Velona/Remix WEA, 2000 – 2CD
Hira nosoratako ho anny namana Polygram, 1998 – CD. Album-fanomezam-boninahitra Dionysis Savvopoulos, ny fandraisana anjara ao aminny "Hazo".
Ambany Bap Fotoam - Vol.1 Freestyle Productions/WEA, 1999 - CD. Famoriam-bola aminny famatoran ny Freestyle Productions, ny fandraisana anjara aminny "aho dia lasa Medusa mix".
4. Ny loharanom-baovao
Τερζίδης, Chris, 2003, "Hip Hop tsy mitsahatra - Hip Hop tsy Mitsahatra", Dikan-teny OXY, Athens, gresy, ISBN 960-8324-46-9
B. D. Foxmoor, 2000, "ny Tsiny eo ny afo", trano Famoahana "Ellinika Grammata", Athens, gresy, ISBN 960-393-198-5
Official website Ambany Bap Foundation/ - Baovao hita tao ny 12 septambra 2006
Official website Ambany Bap Foundation/Fiarahamiasa hita tao ny 12 septambra 2006
Tranonkala ofisialy ny tarika Fahombiazanny/vaovao Fisaorana hita tao ny 12 septambra 2006
Review Album: Andro, hafahafa, mahafinaritra andro, Sotiris Κουσούρη, Avopolis.en hita tao ny 12 septambra, 2006
5. Rohy Ivelany
Ny andinin-teny tany am-boalohany dia avy aminny tranonkala ary navoaka teo ambany fahazoan-dàlana. Κατηγορία:Ελληνικά χιπ χοπ συγκροτήματα
Wikipedia: Active Member